Mitambo yakakurumbira muEngland | Absolut Kufamba
Mitambo yakakurumbira muEngland
maruuzen | | Updated on 15/04/2021 11:39 | England
Iwe unodzidzira chero mutambo? Mitambo yemitambo yekurovedza muviri yakajairika pasirese, asi kune mitambo inozivikanwa kupfuura dzimwe, kana mitambo inoitwa chete kune dzimwe nyika uye kwete ese. Semuenzaniso, iwe unoziva chii mitambo inozivikanwa kwazvo muEngland?
Mutambo hausi mutambo, mutambo unoreva kukwikwidza, mitemo, kurovedza… uye chokwadi ndechekuti mitambo yakawanda inoitwa kuEngland uye mimwe hauzombovaone paESPN. Ngatione zvavari.
1 Mutambo muEngland
2 Mitambo yakakurumbira muEngland
6 Mujaho wemabhiza
Kutanga, zvinofanirwa kutaurwa kuti United Kingdom ine tsika refu mumitambo uye izvo mitambo yakakurumbira yakazvarwa pano. Tinotaura nezvazvo tenesi, of mabhiriyoni, of tsiva, of bhora, of gorofu, the hockey, the Rugby...
Zvitsuwa zvidiki uye vanhu vasina zororo, handiti? Kana isu tichifanira kuita zvishoma nhoroondo saka tinogona kudzokera kumashure kune gumi nemanomwe century uye mafambiro ezvematongerwo enyika aive muzvitsuwa panguva iyoyo.
Iwe zvechokwadi wakanzwa nezvazvo vatsveneVanhu vasinganzwisisike, kwete vanoda mafaro, chaizvo. Eya, maPuritan akarambidza zvinhu zvakati wandei, zvinosanganisira dzimba dzemitambo uye zvimwe zviitiko zvemuviri uye zveboka izvo zvine chekuita nekubhejera. Semuenzaniso, kumhanya kwemabhiza uye tsiva. Nekuwa kwevaPuritan mabasa aya akadzoka musimba.
Pakazosvika zana ramakore rechi XNUMX cricket yakanga yatosimbiswa pakati pevadzidzi veChirungu vepamusoro uye muzvikoro zveveruzhinji iyo bhora. Nemaguta ezana ramakore reXNUMXth, mazhinji emitambo yekumaruwa yakatanga kufamba ichienda kuguta, yakabatana nevashandi, uyezve vepakati neepamusoro kirasi vakagadzirisa. Iwo masisitimu nehupenyu hwavo hwakagadziriswa vakaita zvimwe uye nekudaro mitambo yatinoziva tese kuti yaigadziriswa.
Sezvatakambotaura pakutanga, mitambo yakakosha muEngland uye nyika ndiyo chivako chevakawanda vanozivikanwa pasi rese. Izvi zvinoita kuti UK igare iri mutambi anotyiwa mumakwikwi epasi rese.
Iko kushuvira kwemitambo kwafamba pamwe nekoloni saka nhasi aimbove makoloni seAustralia, New Zealand kana India makwikwi. Semuenzaniso, mukiriketi kana rugby.
KuEngland kune National Rugby League uyezve kune iyo Rugby mubatanidzwa. Mutambo uyu inotora mitemo yayo pakutanga kwezana ramakore rechiXNUMX uye inova inozivikanwa kwazvo muzvikoro, kuti gare gare iende pasirese.
Rugby pano inyanzvi uye yekuvaraidza. Hongu unofanirwa kuziva kuti ivo vakasiyana maragi, iyo Rugby Union uye iyo Rugby League. Vane mitemo yakasiyana, huwandu hwevatambi, nzira dzekufambira mberi pabhora.
Rugby Iyo inonyanya kufarirwa muYorkshire, North West England neCumbria.. Mitambo mikuru inoitirwa pano.
Mutambo uyu yakatonyanya kufarirwa kupfuura tenesi munyika, uye imhaka yekuti iri nyore kuwanakunyangwe iwe uri wekutanga. Kunyangwe chiri chiRungu chakanaka, badminton akaberekerwa muIndia sekusiyana kwetsika yechirungu mutambo unotambwa nemaraki.
Iko kune ipapo iyo Badminton Association yeEngland, yakavambwa muna 1893, iyo inodzora mitambo murudzi uye inotsigira imwe Nyika makumi mana nenomwe panoitwa mutambo uyu.
Kwakatangira uyu mutambo kuchiri kuitirana nharo asi pasina kupokana wakazvarwa muzvitsuwa zveChirungu uye kubvira ipapo wanga uri chikamu chehusope hwenyika. Nhoroondo yakadzokera shure kuzana ramakore rechi XNUMX kana kumberi, nekuti zita remutambo rinotaurwa mumagwaro enguva iyoyo. Chokwadi, inogona kutotambwa kare, serudzi rwemutambo wevana.
Nhasi kune gumi nematanhatu makirabhu ecricket muEngland uye yega yega ine nhoroondo dunhu mazita. Zhizha roga roga imwe yemakirabhu aya anotora chikamu muFirst Class Nyika Championship, mutambo weligi-mbiri wakatambwa kwemazuva mana.
Cricket mutambo uyo shandisa chiremwaremwa nebhora, nezvikwata zviviri zvakatarisana panhandare pakati pazvo pane chikomo chine tsvimbo kwavanofanirwa kupfuudza mabhora.
Ndiyo wechipiri akatarisisa mutambo muUK uye yakamira kwenguva refu. Inogadzira mari yakawanda uye zviitiko zvaro zviviri zvikuru ndizvo Royal Ascot (iyo iyo yemadzishe inoenda nehombodo hombe uye dzisingawanzo kuwanikwa), uye iyo Mutambo weCheltenham.
Mujaho wemabhiza unoitika pazvitsuwa kubvira nguva dzechiroma, yakawanda yemitemo yaro yakatanga pano. Iyo Jockey kirabhu inotangira muna 1750 uye ndiyo imwe inosarudza zvachose zvese mumutambo.
heyi marudzi maviri emarudzi: nhangemutange yakati sandara ine nhanho dzakagadziriswa pamakwara asina kuvharwa, uye iyo National Hunting Mujaho iyo iri refu uye mune iyo mabhiza anowanzo fanirwa kusvetuka.
Kune akakomberedza e 60 mijaho ane rezinesi kuUK, aine mamwe maviri kuNorthern Ireland. Yechinyakare ndeye yaChester, kubva muzana ramakore rechiXNUMX.
Tennis ine kumashure uye vanoita kunge vakadzokera muzana ramakore regumi nemaviri muna France, mudare rake kupfuudza bhora kwaitambwa nekuirova nechanza chanza. Zvinotaridza kuti Luis X aisada kutamba panze uye saka akavhura matare emukati, tsika yakapararira kumizinda yamambo yeEurope.
Rackets akaonekwa pachiitiko muzana ramakore rechiXNUMX uye panguva iyoyo mutambo wainzi tenesi, izwi rinobva kuFrance, tenz, bata kana kutora, chimwe chinhu chakadanidzirwa pakati pevadzivisi. Nekudaro, yakave inozivikanwa kwazvo muFrance neEngland. Henry VIII ainyanya kufarira tenesi.
Tennis yemazuva ano yakadzokera kuma30 ezana ramakore rechiXNUMX uye kubva ipapo vakatanga kumisikidza mitemo nemitemo yemitambo. Nhasi, mutambo Wimbledon Ndiyo inonyanya kuzivikanwa muEngland uye imwe yeakakura slam yeATP Tour. Yakatambidzwa kubvira 1877.
Uyu mutambo wakazvarwa muIjipita yeEjipito nanhasi yakafanana nemayunivhesiti echiChirungu uye zvikoro. Muchokwadi, mutambo sekuziva kwedu wakazvarwa pakutanga kwezana regumi nenomwe zana regattas iyo yakaitirwa paRwizi Thames, muLondon, uko mibatanidzwa yakasiyana nemakambani aikwikwidza. Pakazosvika zana ramakore gumi nemasere, "zvikwata zvezvikepe" zvakazvarwa muzvikoro zveveruzhinji senge Eton College kana Chikoro cheDurham uye mumayunivhesiti anozivikanwa seCambridge kana Oxford.
La International Rowing Federation yakavambwa muna 1892 uye ndiyo iyo iyo inodzora mutambo izvo chaizvo, ine nyika zana nemakumi mashanu. Kukwasva iwo mutambo we olympic uye anga ari mumitambo kubvira 1896. Varume vacho vanga vachikwikwidza kubva ipapo, asi vakadzi chete kubvira 1976.
Gorofu iyo yakagadzirwa mu scotland asi inozivikanwa kwazvo muEngland. Akazvarwa kumahombekombe ekumabvazuva kweScotland, padhuze neElinburgh, uyezve vatambi vaikanda hurungudo pamatombo ejecha. Vanhu vekuScotland vaifara zvekuti vakatoregeredza kudzidziswa zvechiuto muzana ramakore rechiXNUMX, saka King James I akasarudza kurirambidza.
Hapana akamboteerera zvakanyanya, uye gorufu yakazove mutambo unotsigirwa nehumambo muzana ramakore rechiXNUMX, pasi pekubvumidzwa naMambo James IV. Kubva kuScotland kuenda kuEngland uye kubva kuEngland kuenda pasi rese. Yakava yepamutemo muEngland nekuvambwa kweGentlemen Golfers muLeith, kekutanga kirabhu yegorofu, muna 1744. Yekutanga 18-hole gorofu kosi yakavakwa kuSt Andrews muna 1764, ichiisa muyero wemutambo.
Gorofu yakapararira kubva paruoko rweBritain Humambo muzana ramakore rechiXNUMX, kuIndia, Ireland, Australia, Canada, United States neHong Kong. Iyo Industrial Revolution yakaunza shanduko zhinji uye chitima chakaita kuti makirabhu egorofu abve mumaguta akananga kumaruwa, achiwana vateveri nevatambi. Kugadzirwa kwemabhora uye makirabhu kwakachinjawo. IBritish Open yakazvarwa muna 1860.
Kutonga kweChirungu pamusoro pegorofu kwakaguma apo akaonekwa panzvimbo muUnited States, muna 1894. Mubatanidzwa wako yakasimbisa iyo yekupedzisira mitemo yemutambo uye akaumba makirabhu mazhinji. Nhasi, nepo makosi egorofu muUnited States akanaka uye achiratidzika kunge akagadzirwa manyorerwo, iwo ari muEngland akaomarara uye haana kutsvinda.
Chero zvazvingaitika, kukudza kwayakaberekerwa, mamwe emitambo inozivikanwa kwazvo yegorofu pasi rose achiri muScotland nhasi: Gleneagles, Carnoustie, Saint Andrews, Royal Troon ...
Nhabvu ine nhoroondo refu pano uye zviripo magwaro anotaura nezve nhabvu mu 1314. Zvakare, makwikwi ekutanga epasirose akaitika pano uye yekutanga ligi yehunyanzvi yakavambwa pano futi.
Kune anopfuura zana zana makirabhu ebhora uye ligi inozivikanwa kwazvo inozivikanwa se Premier League. Iyi ligi ine zvikwata makumi maviri kuyambuka UK uye pakati pezvakakurumbira paneArsenal, Liverpool kana Manchester United.
Nhabvu inodzorwa pano neBlack Association, chimwe chezvinhu zvekare pasi rese. Iyo yakazvarwa kutonga akasiyana akasiyana enhabvu akatambwa panguva iyoyo muzvikoro zveruzhinji zvemunyika. Tinogona kutaura kuti iyi mitemo inotorwa kubva kuCambridge Rules, yakagadzwa neyunivhesiti iyi muna 1848.
Ruoko rwakabatana nemaChirungu aifamba nemakambani kwese mutambo wepasi rose wakayambuka miganhu. Nhasi uno ndomumwe wemitambo yakatambwa kwazvo pasirese, zvese zvehunyanzvi uye zvekuvaraidza. Mukombe wePasirose wakarongedzwa neFIFA hapana mubvunzo kuti vanhu-vanofadza uye mari yakawanda.
Parizvino, mimwe mitambo inozivikanwa muEngland. Tinogona kuwedzera kune iyo chinyorwa iyo kushambira, nzira uye munda, munda uye hockey yechando, uye volleyball.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Mitambo yakakurumbira muEngland
Chii chekudya muBari
Ndeapi anonhuwirira anonyanya kushandiswa muIndia?